Yusuf Garaad: Ka dib 1988 - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Afar iyo Labaatanaad
Ka dib 1988 - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Afar iyo Labaatanaad
Maxaabbiistii 77 markii dalka lagu soo celiyay 1988 waxaa loo soo dhoweeyay si sharaf leh. Sida ugu sarreysa ee Qarannimo ayaa loo soo dhoweeyay.
Marka aan barbadhigay Maxaabbiistii Ethiopia ee 1988 laga sii daayay Soomaaliya, inkasta oo aanan aad uga warqabin, ugu yaraan waxay leeyihiin Urur ayaga u taagan - ciidan iyo rayidba.
*Peter Stocker, waa khabiir aan in badan soo wada shaqeynay. Waxaan si dhow ula shaqeeyay sannadihii 1989 iyo 1990. Wuxuu ahaa mas’uulkii horseedka ka ahaa hirgelinta iyo ka shaqeysiinta Isbitaalka Qalliinka dhaawacyada Dagaalka ee ICRC ee Berbera. Sidoo kale wuxuu horseed ka ahaa tegitaanka iyo ka howlgalidda ICRC ee Hargeysa, Burco, Borama, Ceerigaabo, Sallaxleey iyo Ceel Af Weyn sannadihii 1989 iyo 1990. Labada goobood ee dambe waxaa haystay Jabhadda SNM. In ICRC ay Dowladda Soomaaliya ka hesho oggolaasho ay ugu duuli karto Sallaxleey iyo Ceel Af Weyn si ay howlo samafal ah uga fuliso waxaa loo galay dadaal badan oo caqabado la kulmay laakiin akhirkii lagu guuleystay.
Posted by Yusuf Garaad at 10:41:00